Qorshayaal cusub oo iPhone 7 ah oo xaqiijin lahaa afhayeenka labaad | Wararka IPhone
Shalay ayaan daabacnay maqaal taas oo aan ku arki karno dhabarka dambe ee iPhone 7. Sawirkaas waxaan ku aragnay waxyaabo aan ku habboonayn wararka xanta ah ee aan maalmahan aragnay, sida giraanta ilaalinaysay kaameradda oo aysan ahayn inay halkaas joogto, laakiin maanta waa cusub Kuwani waxay u muuqdeen sawirro qaab jaantusyo ah oo, mar labaad, muujinaya waxa iPhone 7 kiiska iyo iPhone 7 Plus / Pro.
Sawiradu waxay ka soo muuqdeen WeChat, laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah way ka dhawaajisay NoWhereElse (halka aad kuqorto OnLeaks) iyo inaan aragno wax aynaan ku arkin qariidooyinka kale: hoosta waxaa ku yaal laba hadla mana ahan mid lamid ah tan iyo iPhone-kii asalka ahaa. Tani waa wax isla Faransiis dhexdhexaad ah la daabacay 25-kii Juun ee la soo dhaafay, laakiin waxa aan maanta haysanno ma ahan dabool jir ahaaneed, laakiin waa waxoogaa farsamo ah ama roon isla sanduuqa gadaashiisa.
Qorshayaasha cusub ee iPhone 7
Wixii kale oo dhan, kuwii hore waa la xaqiijiyay roon, taas oo aan ahayn inay xumaayeen, haddii aanu ahayn in Apple uu tijaabinayay laba nooc oo kala duwan ugu dambayntiina uu go’aansan lahaa midka leh labada ku hadla. Iyadoo tan lagu sharaxay, khadadka anteenooyinka waxay ku yaalliin geesaha kore iyo hoose iyo kaamirooyinka ayaa labaduba aad uga weyn. Sida ay sheegayaan wararka xanta qaarkood, iPhone 7 kaamiraddu waxay noqon doontaa 21mpx, halka kamarada iPhone 7 Plus / Pro ay noqon doonto 12 + 12Mpx. Sidoo kale ma jiro deked sameecadda dhagaha oo dhan 3.5mm. Dhinaca kale, markaan fiirinayo, waxaan dareemayaa dareenka ah in Aqoonsiga Taabashadu waxyar gudaha ku jiro, taas oo macnaheedu noqon lahaa inaysan noqon doonin mid taabasho leh.
Iyadoo aan laga hadleynin cabirrada, jaantusyadan ma xaqiijin karaan mana diidi karaan inay jiri doonaan saddex nooc oo kala duwan, taas oo ah, moodel 4.7-inji ah oo leh kaamerad caadi ah, nooca 5.5-inji sidoo kale leh hal muraayad iyo a 5.5-inji Pro ah oo leh kamarad caan ah oo hadda caan ah. In kasta oo macluumaadka maanta oo kale ah ay sii socdaan inay soo muuqdaan, si shaki kasta looga baxo waa inaan sugnaa ilaa Sebtember.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 7 » Qalab cusub oo iPhone 7 ah ayaa u muuqda kaas oo xaqiijin doona afhayeenka labaad
Voice Recorder Pro, bilaash wakhti xadidan